157 qof oo ku dhintay Diyaarad Ethiopian Airlines ee burburtay – Radio Daljir
157 qof oo ku dhintay Diyaarad Ethiopian Airlines ee burburtay
Maarso 10, 2019 11:12 b 0
Ugu yaraan 157 qof iyo 8 qof oo shaqaale ah ayaa ku dhimatay diyaarad ay lahayd shirkada Itoobiya Airlines oo hawada ku bur burtay xili ay ku siijeeday magaalada Nayroobi ee caasimada dalka Kenya .
Diyaaradan ayaa nooceeda waxa uu ahaa Boeing 737,waxayna ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee Addis-Ababa.
Lama oga waxa ilaa iyo haatan sababay shilkan ay ku dhinteen dadkii saarnaa diyaaradan.
Ra’isul-wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in diyaaradaasi ay bur burtay lixdaqiio kadib markii ay ka duushay Addis-Ababa.
Waxaa la aminsanyahay in diyaaradan ay saarnaayeen rakaab Soomaali ah oo usocda magaalada Nayroobi
Wasiir Xoosh oo Muqdisho lagu aasay